प्राईम बेसार’ साउन १५ देखी बजारमा, आधिकारिक विक्रेता गजुरीयल डटकम ! « गोर्खाली खबर डटकम
प्राईम बेसार’ साउन १५ देखी बजारमा, आधिकारिक विक्रेता गजुरीयल डटकम !
२०७७ असार ५ गते शुक्रवार प्रकाशित
स्वदेशी उत्पादन ‘प्राईम बेसार’ साउन १५ गतेदेखी बजारमा आउँदैछ । उत्पादक ब्राण्डवर्थ कुटिर उद्योगका प्रोपाईटर भाइ मोहन गजुरेललाई हार्दिक बधाई । बेसारको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय आधिकारिक बिक्रेताको रुपमा ‘गजुरीयल डटकम’लाई दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद । बदलिंदो परिस्थितिमा हाम्रो यो फरक प्रयासलाई पनि उतिकै मन पराईदिनु हुने अपेक्षा गर्दछौं ।
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसिसी)सहित पार्टी संचालनसम्बन्धि मुख्य मुद्दाहरुमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आफ्नो साथ नरहेको प्रष्टिकण दिएका छन् ।
उपाध्यक्ष गौतमले आफ्नो सचिवालयका सदस्य तथा प्रेस संगठनका नेता समेत रहेका विश्वमणी सुवेदीमार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन् । सुवेदीमार्फत गौतमले ३ बुँदे प्रष्टिकरण दिँदै पार्टीभित्रको अन्तरविरोध र मुख्य मुद्दाहरुमा आफ्नो ‘पोजिसन’ स्पष्ट पारेका हुन् ।
उक्त प्रस्टिकरणमा गौतम सरकारमा जाने हल्ला पूर्णत निराधार रहेको उल्लेख छ । त्यसैगरी उनले सरकारमा जाने र प्रधानमन्त्रीका कदमहरुका पक्षधरका रुपमा चित्रित गर्ने क्रम बन्द गर्न पनि ओलीपक्षधरलाई चेतावनी दिएका छन् ।
‘केपी ओलीका कार्यशैलीमाथि पार्टी नेतृत्वभित्रै अनगिन्ती असहमति छन् । समयक्रममा ती बाहिर आउने छन् । वामदेव यही कित्तामा अडिग हुनुहुन्छ । एमसिसीसहितका विभिन्न निर्णय प्रक्रियामा उहाँ प्रधानमन्त्रीको साथमा हुनुहुन्न । सरकारमा पार्टीका संस्थागत निर्णय कार्यान्वयन नहुने, सरकार र पार्टी अलग किसिमले चल्नेबारे पार्टी नेताहरूको छिट्टै सामुहिक प्रतिक्रिया आउँदैछ । वामदेवलाई पनि त्यहीँ भेटिदैछ’ सुवेदीले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेका छन् ।
केही समय सार्वजनिक प्रतिक्रियामा गौतम नआउने उल्लेख छ । नेकपामा एमसीसी अनुुमोेदन गर्ने तथा सरकारका काम कारवाहीका विषयमा दुईथरी मत छ । त्यहीँ क्रममा प्रधानमन्त्री ओली पक्षले गौतमले आफुलाई साथ दिने र त्यसको बदला मनत्रत्री बनाउने चर्चा चलाएपछि उनले आफ्नो कित्ता क्लियर गरेका हुन् ।
एमालेले भदौ २७ र २८ गते काठमाडौंमा विधान महाधिवेशन गर्ने
फेरी आज सुनको मूल्य बढ्यो,तोलाको कति?पढ्नुहोस